Gcina umsebenzi wakho wewebhu
Ungashiyi imicabango yakho kuzingxenyekazi okungezona ezakho
Uma uthumela impendulo kuwebhusayithi, noma inethiwekhi yokuxhumana nabantu ishiywa lapho, mhlawumbe isikhathi eside, noma ekugcineni izosuswa. Ukuba ne-middleware phakathi kokukhiphayo nokokufaka okugcina noma yini oyibhalayo endaweni kuyinto engabonakala ingenamsebenzi esikhathini esifushane, kepha njengoba uqoqa idatha eningi, ingasetshenziswa njenge-database yokusesha okugcwele kwemibhalo yemicabango yakho, noma ukuqeqesha i-chat bot ukunikeza izimpendulo kufana neyakho.
Inkinga nge-software enjalo yi-interface, ngokuqinisekile ufuna ukugcina umbhalo ngemuva kokuthi ufomethwe kahle, ngakho-ke kufanele kube okuphelele Umhleli we-WYSIWYG abasebenzisi abahlangana nawo esikhundleni sesihleli esinikezwa kuwebhusayithi / kwipulatifomu. Lokhu kuvame ukuzwakala kuxakile futhi kungabonakali kahle, futhi uma ucabanga ukuthi intshisekelo yesikhashana yokungena ngemvume konke ukuxhumana kwakho incane kakhulu, ukuqaliswa okunobungane nokwamukelwa komsebenzisi kunzima.
Kukhona isixazululo sabahleli abanjengo-emacs / vim esikuvumela ukuthi ubhale ngaphakathi kwesihleli bese uthumela umbhalo lapho uya khona, noma ngabe kulokhu intshisekelo ikukuthuthukisa isipiliyoni sokuhlela, hhayi ukugcina ithrekhi yomkhiqizo.
Thumela Amathegi: izibani ezikhanyayo, izinhlelo zokusebenza